Qaybta 1. waxaa suurtagal ah in dib Lugood in iCloud?
Qaybta 2. Back Up Lugood in Lugood Match
Qaybta 3. Back Up Lugood in External Hard Drive
Qaybta 4. Wondershare TunesGo
Milkiilayaasha weyn ee qalabka macruufka leeyihiin kartida kala duwan ee ay taageerto kor u files ay qaali ah. Waxay dooran karaan in ay dib u kor files si ay u Lugood ama iCloud. Waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya qaar Lugood iyo iCloud iyo ilaalinta isitcmaalo faylasha aad waxaa lagu talinayaa in labadoodaba ay isticmaalaan waqti isku mid ah. Laakiin, dadka isticmaala badan door bidaan isticmaalaya iCloud tan iyo xogta lagu kaydiyaa on a, iyo sidoo kale, daruur. Iyo wax walba oo dhaca, xogta halkaas sii joogi doono.
Sida ku xusan ka hor inta milkiilayaasha qalab macruufka badan ayaa raadinaya hab ay u gudbiyaan hayaan ay Lugood in iCloud, sababta oo ah macluumaadka waa mid yara ammaan marka lagu kaydiyaa si iCloud. Nasiib darro, Lugood si toos ah gurmad iCloud waa wax aan macquul aheyn. First of dhan, iCloud ma taageeri dhammaan noocyada file Lugood falaa ah. Markaasaa kii labaad oo dhan, waxaa jira wax aan (weli) si ay u gudbiyaan aad gurmad Lugood in iCloud. Sidaas, gebi ahaanba, taageerto kor u Lugood in iCloud waa wax aan macquul aheyn.
Inkastoo, waxaa jira hal wax oo aad samayn kartay. Haddii ay jirto gurmad ah qaar aad Lugood in aad rabto in aad u xun, waxaad isku dayi kartaa samaynaya soo socda. First of dhan, celin gurmad in ka Lugood in qalab aad. Tani ma noqon karaan sida fikrad fiican, tan iyo markii aad waayi doonto dhammaan xogta aad haddeer haysatidna. Laakiin, haddii aad doorato in aad sidaas samayso, soo celiyo qalab aad si gurmad la doonayo oo dibna u geliyaan in gurmad ay u iCloud ka qalab aad si toos ah. Habkan, aad bypassed wax aan macquul aheyn ka. Nooc ka mid ah.
Waxaa jira fursado kale oo ay taageerto kor u Lugood aad.
qayb 2. Back Up Lugood in Lugood Match
Ma maqashay ee Lugood Kulanka? Waa codsi ah in kuu ogolaanayaa inaad dib ilaa music oo dhan si aad u iCloud. Sidee ayey u shaqeysaa? Waa mid aad u fudud. Lugood go'aaminaya heeso ka ururinta waxaa laga heli karaa Lugood dukaanka. Song kasta oo kulan waxaa si toos ah intaa ku daray in iCloud, oo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u maqlaan waqti kasta, qalabka kasta. Wax weyn oo ku saabsan Lugood kulanka waa in ay mararka qaar xitaa kor u qaadi kara tayada heeso. Wax xun oo aan dhammaan heeso lagu wareejin karaa.
Marka ay timaado in ay taageerto kor u Lugood in Lugood kulanka, waxa laga yaabaa in sida fikrad fiican noqon. First of dhan, marka ay timaado in ay taageerto kor u Lugood, laga yaabaa inaad xaq u doonayaan in ay dib u kor u badan heeso,? Iyo, sidoo kale Lugood Kulanka ma ay jariiradu. Mararka qaarkood, waxaa mismatches heesaha, badalay songs cad la versions nadiif ah, iyo kulan track album-dhererka la version gaaban. Tani waxay dhacdaa si dhif ah, laakiin waxaa laga yaabaa in ay dhacdo in aad song jecel. Oo hadday sameeyey, waxaad noqon lahayd in ka badan careysan.
Xalka fiicnayn ay taageerto kor u Lugood loo taageero u lahaa ku wadid dibadda. Habkan, faylasha aad nabadgelyo ku heli doonto xataa haddii shil kombiyuutarka aad. Drive External noqon karaa wax ka ulaha USB in drives adag dibadda.
Backing ilaa Lugood si aad u computer waa fikrad aad u fiican. Laakiin, ma garan kartid marka aad disk adag aad ku guul dareysato laga yaabaa. Taasi waa sababta mid ka mid ah siyaabaha ugu ammaanka badan ay taageerto kor u Lugood loo taageero u lahaa ku ah drive dibadda adag.
Drives adag External waa mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee ilaalinta faylasha aad. Waxa ugu fiican ee iyaga ku saabsan waa in aad dib kartaa in ka badan kaliya Lugood. Laakiin, halkan waxaan kuu sheegi doonaa sida in ay dib u kor maktabadda Lugood in an drive dibadda adag.
Marka aad qaadato dibadda adag drive bilow adigoo deeruhu galay computer ay ku jiraan maktabadda Lugood aad. Hubi in drive dibadda ayaa meel ku filan si loogu kaydsado maktabadda oo idil. Marka drive adag la aqbalo by your computer, abuurtaan Lugood.
Markaas, waa in aad hubiso in maktabadda Lugood oo dhan faylasha aad (mustaqbalka) ee folder isku gelin doonaa sameeyo. Waxaad ku hubin karnaa si ay dooranayso in aad nuqulka files si folder Lugood Media mar aad ku jirto tab sare.
Mararka qaarkood, Lugood ma kaydiso files oo dhan ee hal folder. Si loo gaaro tan furan menu File Library Abaabulaan Library. Marka aad ku sugan tahay waxaa, doortaan raaciyo Files. In la isku raaciyo Faylal ay dhammaan faylasha loo isticmaalo in aad Lugood Library guuri doono hal meel ah.
In la isku raaciyo Faylal ay dhab ahaantii ka dhigaysa koobiyada faylasha, halkii ay iyaga u dhaqaaqo, si aad laga yaabaa oo tus ka faylasha in ay ku kaydsan ka baxsan folder Lugood Media. Waa in aad tirto faylasha kuwa bannaanayd badbaadiyo markii gurmad ah waa dhameystiran yahay.
Si looga fogaado buunbuuninayo waxan oo dhan, iyo tallaabooyinka kor ku xusan, waxaad isku dayi kartaa si fudud uga TunesGo.
Marka aad furto Wondershare TunesGo, guji Maamul Lugood Library dhinaca midig ee suuqa. Laba badhamada muuqan doonaa. Qofka ugu horeeya ee kuu ogolaanaya in aad si aad u nadiifiso maktabadda, iyo mid labaad si aad u dhiska.
Marka aad riixi on tayeeyo Lugood Library, xiro qalabka aad.
Marka qalabka ku xiran, riix Start iyo waxa ku jira oo aan Lugood qalabka la marsiiyey doonaa.
Ka dib markii baaritaan lagu sameeyo, doortaan files jecel oo guji Copy in Lugood. Habkan, faylasha lagu soo guuriyeen doonaa maktabada Lugood iyo waxa la dhisi doonaa kaliya seddex talaabooyin fudud.
Iyo, in ay tahay! Waxaad samayn.
Waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo lacag la'aan ah. Haddii aad jeclaan, waxaad ka iibsan kartaa liisanka ee Meyeydaan wax qiimo ah la awoodi karo!
> Resource > Lugood > Ma macquulka ah inay dib Lugood in iCloud